I-3D Ebaziweyo-Udonga Nobuciko - I-Morningstar Stone Co., Ltd.
Iphethini yesitayela se-White Sivec Exotic odongeni oluqoshiwe lwe-3D
Lesi sinyathelo sibalulekile futhi sibalulekile kuzo zonke izinyathelo ezilandelwayo. Amatshe ama-cubic block nama-slabs kusatshalaliswa kabanzi impahla eluhlaza ekulungele ukucubungulwa. Ukukhethwa kwezinto zokwakha kuzodinga ulwazi oluhlelekile lwezinhlamvu ezibonakalayo kanye nokusetshenziswa kanye nengqondo ekulungele ukutadisha noma yini entsha. Ukuhlolwa okuningiliziwe kwempahla eluhlaza kuhilela: ukulinganisa ukurekhoda nokuhlola ukubukeka komzimba. Inqubo yokukhetha kuphela eyenziwe kahle, umkhiqizo wokugcina ungadalula inani lalo lobuhle nokusetshenziswa kwalo. Ithimba lethu lokuthengwa kwempahla, lilandela isiko lenkampani lokukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphakeme kuphela, linobuchule ekutholeni nasekuthengeni izinto ezisezingeni eliphakeme.
CNC Ukubaza ▼
Imishini embonini yamatshe yenzeke kungekudala. Kepha kuyikhulise kakhulu imboni. Ikakhulukazi imishini ye-CNC, ivumela ukusetshenziswa okwengeziwe kokuklama nokwakhiwa kwamatshe emvelo. Ngemishini ye-CNC, inqubo yokubaza itshe inembe kakhulu futhi isebenza kahle
4) uma kukhona izingcezu ezinokukhubazeka: izimbobo, izindawo ezinkulu ezimnyama, ukugcwaliswa okuphuzi okudinga ukushintshwa. Phela amapaneli ayabhekwa futhi afakwa ilebula. Sizoqala inqubo yokupakisha
Sinezigaba zokupakisha ezikhethekile. Ngesitoko esivamile sokhuni neplywood ebhodini efektri yethu, siyakwazi ukwenza ngokwezifiso ukupakisha ngohlobo ngalunye lwemikhiqizo, kungaba ejwayelekile noma engajwayelekile. Abasebenzi abangochwepheshe abaphekela ukupakisha komkhiqizo ngamunye ngokucabangela: umthwalo olinganiselwe wesisindo sokupakisha ngakunye; ukulwa ne-skid, anti-collision & shockproof, ukuvimbela amanzi. Ukupakisha okuphephile nobungcweti kuyisiqinisekiso sokunikezwa okuphephile komkhiqizo ophelile kumakhasimende